आँखाको थकान, टाउको दुखाई र अनुहारमा चाउरी पर्न नदिने 'फेस' योग (तरिका सहित) :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
आँखाको थकान, टाउको दुखाई र अनुहारमा चाउरी पर्न नदिने 'फेस' योग (तरिका सहित)
स्वास्थ्यखबर सोमबार, जेठ २, २०७९, ०६:००:००
अनुहारको चाउरीपनाबाट या चमक आएन भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? उसो भए तपाईंका लागि ‘फेस योग’ अर्थात् अनुहारको योगासन तयार छ। बेलायतमा फेस योगका लागि चर्चित डानियला कोलिन्स र जुलिया अनास्तास्युले यसको प्रयोग सुरु गरेका छन्। उनीहरु बेलायतका ‘फेस योग सुपरट्रेनर’ हुन्।
एक घन्टाको ६५ पाउन्ड लिएर आफूले सिकाउने २५ मिनेटको कार्यक्रमले अनुहारलाई सदाका लागि परिवर्तन गर्ने दाबी जुलियाको छ। उनीहरुको दाबी छ, ‘यो योगाले चाउरीपना हटाएर अनुहारलाई मुलायम बनाउँछ र स्वस्थ चमक ल्याउँछ। यसका साथै यसले आँखाको थकान र टाउको दुखाई पनि हटाउँछ।’
अनुहारको योग हप्तामा ६ दिन गर्ने हिसाबले तयार पारिएको छ र सातौं दिनमा मात्र रिजल्ट आउने दाबी जुलियाको छ। अनुहार योगाले अनुहारलाई ५ वर्ष घटाउने दाबी पनि गरिएको छ।
यसअनुसार विभिन्न १८ प्रकारका फेसियल पोजहरु गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि गाडीको जाममा परेका बेला मुखमा चारैतिर जिब्रो नचाएर ‘टङ ट्वीस्टर’ योगा गर्न सकिन्छ भने बाथरुममा बसेर ‘जिराफ’ योगा पनि गर्न सकिन्छ। जुलियाका अनुसार यसको सिद्धान्त के हो भने विशेष प्रकारका गतिविधिमार्फत् अनुहारका मांसपेशी सही हिसाबमा आउछन्। यसबाट कोलाजन र प्रोटीन तत्वहरु उत्पादन हुन्छन्, जसले छाला लचिलो हुन्छ र युवा अनुभूति दिन्छ।
१.आओल (लाटोकोसेरो आकार) :
यसअनुसार दुवै आँखालाई समेट्दै (चित्रमाजस्तै) आंैलाले अंग्रेजी अक्षरको सी आकार बनाइ घुमाउनुपर्छ। निधारमा आराम महसुस गर्दै आँखा खुला राख्नुपर्छ। यो प्रक्रिया ३ पटक गर्नुपर्छ। एकपटकमा १० सेकेन्ड औंला घुमाउनुपर्छ।
२. भी (अंग्रेजी भी आकार) :
औंलालो अंग्रेजी अक्षरको भी आकार बनाई आँखीभौंको दुवैतिर औंला राख्नुपर्छ र शक्तिशाली हेराई बनाउनुपर्छ। यस्तो प्रक्रिया ६ पटक गर्नसकिन्छ। प्रक्रिया सकिएपछि १० सेकेन्ड आँखा चिम्लिएर रिल्याक्स महसुस गर्नुपर्छ।
३. सर्कल द आइज :
आँखाको चारैतिर गोलो घेरा बनाएर औंला घुमाउनुपर्छ। एकपटक दायाँतिरबाट अर्कोपटक बायाँतिरबाट घेरा बनाएर घुमाउनुपर्छ। यस्तो प्रक्रिया ४ पटक गर्न सकिन्छ।
४.पफर फिस :
गाला फुलाएर बिस्तारै हातले हान्नुपर्छ। हातले ३० सेकेन्डसम्म हान्न सकिन्छ।
५. जिराफ :
टाउको अलिकता बंग्याएर पछाडि लैजाने र फेरि तल झार्ने प्रक्रिया गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया दुईपटक गर्न सकिन्छ।
६. ह्याम्स्टर चिक्स :
एउटा गाला ठूलो बनाउने र त्यसमा जम्मा भएको श्वास अर्को गालामा पठाउने प्रक्रिया हो। यसरी हावा पठाउने प्रक्रिया ३० सेकेन्डसम्म गर्न सकिन्छ।
७. ज टोनर :
बंगारालाई बाहिरैबाट समातेर कानतिर बिस्तारै तान्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया ३ पटक गर्न सकिन्छ।
८.किस द स्काई :
आकासतिर चुम्बन गर्ने प्रक्रिया हो, यो १० पटक गरिन्छ।
अनुहारको सबैभाग समेट्ने गरी हातले समाई बिस्तारै मालिस गर्नुपर्छ। यो अवस्थामा आँखा बन्द गर्न सकिन्छ।
आँखाको ज्योति बढाउने योग 'नेत्रशक्ति विकासक': कसरी गर्ने? योगाभ्यासका लागि शरीरलाई तयार गर्न विभिन्न अंग विशेष तथा जोर्नीहरूलाई सक्रिय, खुकुलो र लचकदार बनाउनका लागि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम वा अङ्ग व्यायामहरू गरिन्छ। मंगलबार, असार ७, २०७९
डब्ल्यूएचओको परम्परागत औषधि अनुसन्धान केन्द्रबाट नेपालले यसरी लिन सक्छ लाभ परापुर्वकालदेखि हामीले अपनाउँदै आएका औषधि उपचार विधिहरुको वैज्ञानिक अध्ययन त्यसमा प्रयोग हुने जडिबुटीहरुको प्रभावकारीता विषाक्तता, ओषधि विकास र शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा समेत साझेदारी गर्ने अवसर मिल्ने छ। सोमबार, वैशाख २६, २०७९
स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि योग गुरुशिक्षा परम्पराबाट बाहिर आएको योगलाई सुत्रवद्ध र एकत्रित गर्ने काम महर्षि पताञ्जलीले गरेका थिए। महर्षि पताञ्जलीले राजयोगमा विस्तार गरेको योग सुत्रलाई अस्टाङग योग भनिन्छ। नाथ सम्प्रदायका प्रवर्तक शिवभक्त योगी मत्स्येन्द्रनाथका शिष्य गोरखनाथले हठयोग ग्रन्थ लेखेका थिए। आइतबार, वैशाख २५, २०७९